mapurisa - Nyambo dzino kodza mwoyo
Nyambo dzine tag ' mapurisa'
mapurisa mbavha coffin
mapurisa president Robert Mugabe kudonha
Ndiri weku Traffic
Pastor vakasvika nepaZRP ndokuona officer vachirava bible. Zvakavakatyamadza vakati, whaat! Mapurisa anoravawo magwaro nhai? Vakabvunza simple qstion yemubhaibheri vakati: "nhai officer ndiani pakati paCAIN naABEL akauraya munin'na wake?"
Officer ndokuti "Pastor bvunzai constable varimucharge office ndovanodealer nedzeMurder, ini ndiri weku Traffic!"
mapurisa Mapurisa (ZRP) pastor bhaibheri pentecostal
mapurisa Mapurisa (ZRP) dofo shongrish zrp
mapurisa Mapurisa (ZRP) mbavha church rufu
Mapurisa haakushayiri mhosva
Mapurisa haakushairi mhosva kana vachida cash.
Vamwe madzibaba vaive neka family car vakamiswa paroadblock vakanzi seyi uchifamba wega ko ukafa vamwe vanozoziva seyi toda $40,00.
Madzibaba vaya ndokuti handifambi ndoga ndina Maikoro, Ishemairi, Damureta, Mikairi, Joshua, Gabrieri, Andiria Ginatsio naCrab vatumwa vaMwari. Mupurisa uya ndokuti aaaaa vanhu 9 mukamota kakadai!! Overload ka iyi wedzera taakutoda $90,00.
mapurisa Mapurisa (ZRP) mapositori
Masasi ekupenga - tear gas ye ma riots (2016)
Sorry guys mukangoonawo ndati zii. Tight programme, ndiri busy mazuva ano handisi kubatika. Ndakawana tender yeku supplier tear gas.
mapurisa Mapurisa (ZRP) harare tear gas (2016) anti mugabe riots 2016
Ndanga ndiripaborder nhasi vamwe baba vabatwa nembanje vakanyepa kuti mufushwa mapurisa akavapa cooking oil, poto nesalt kuti vabike. Vapedza kudya ndobva vati ndandisingazive kuti kana dzabikwa dzinonaka, zvikanzi nemapurisa dzii, vakati "dzimufushwa"
mapurisa mbanje muriwo beitbridge mufushwa
mapurisa whatsapp kukara econet chikwereti